Ikhabhathi encinci kwi-Gila "I-Gatehouse" - I-Airbnb
Ikhabhathi encinci kwi-Gila "I-Gatehouse"
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguRose
Kufuphi neGila Wilderness kunye nomlambo, iBearpaw Ranch ime ngokugqibeleleyo ukonwabela yonke into enikezelwa ngummandla. 35 m ukusuka eSilver City NM. Yabucala kakhulu kwaye izolile. Ukuhamba nje okufutshane ukuya kuMlambo iGila kunye namachibi ethu ama-4. Isibhakabhaka esimnyama ngokugqibeleleyo sobusuku bokubuka iinkwenkwezi.
Le ndlu ikwi-140 yeehektare nje emantla edolophu encinci yaseGila.
Kukho amachibi ama-4 amancinci kwipropathi kwaye kulula ukuhamba ukusuka ekhabhathini. Umlambo we-Gila uhamba phakathi kwe-ranch kwaye ababukeli beentaka bayonwabile!
Amahashe amkelekile kwaye ndinedlelo kunye namaxabiso azinzileyo. I-Gila Wilderness ifikeleleka ngokulula kwaye i-ranch isondele ekupheleni kwendlela egangathiweyo kwi-Turkey Creek yokungena entlango.
Indawo enomtsalane ibandakanya iWild West Rodeo, uMnyhadala weJazz weSikhumbuzo, kunye noKhenketho oludumileyo lwehlabathi lwemidyarho yebhayisekile yaseGila ngo-Epreli.
Le ndlu ihlala yodwa malunga neeyadi ezingama-150 ukusuka kwindlu enkulu. Eyona nto iyonwabisayo ngokuba seBearpaw Ranch kukuba wedwa kunye nokuzola. Ungahamba iintsuku ngaphandle kokunxibelelana nabantu okanye ungadibana nabantu basekhaya ngokundwendwela amashishini engingqi. Ndihlala kwipropathi kwaye ndiqhubeka neshishini lam ndingalindelanga naluphi na unxibelelwano neendwendwe zam. Ndinobubele, kodwa hayi nosy! Ungahlaziya kwakhona apha!
I-Gila sisiqingatha sedolophu ezimbini "intlambo" yoluntu. I-Cliff yidolophu ekwintshona yomlambo kwaye iGila yidolophu esempuma. Kukho uthando olwahlukeneyo lwabantu abathi intlambo likhaya labo.
Le yifama encinci esebenzayo kwaye sihlala sixakekile sisebenza kwinto ethile. Siyakuthanda ukudibana nabantu abatsha kodwa siyayihlonipha imfihlo yakho. Unokuchitha iintsuku ungaboni mntu ukuba ukhetha njalo. Kukho ithala leencwadi loluntu elincinane kunye neziko laBantu abaPhezulu elikwi-3miles ezantsi kwendlela ukuba ufuna ukuhlalisana ngakumbi. I-Duck Creek Café yindawo yokutyela yelizwe enobuhlobo nje eyi-7 okanye imizuzu esi-8 ukuya eCliff. Kuxhomekeke kuwe ngokwenene. Sifuna ukuhlala kwakho apha kuphumle kwaye kuhlaziyeke, okanye kuxakeke kwaye kube ngumngeni.
Le yifama encinci esebenzayo kwaye sihlala sixakekile sisebenza kwinto ethile. Siyakuthanda ukudibana nabantu abatsha kodwa siyayihlonipha imfihlo yakho. Unokuchitha iintsuku ungab…